Ikhaya Amasu we Forex (MT5) Zigzag Support and Resistance Pin Bar Bounce Forex Trading Strategy for MT5
Ephreli 24, 2021
In lelisu, sizobe sithengisa isu lokuguqula elisebenzisa isenzo senani, amazinga wokusekelwa nokumelana, kanye namaphethini wekhandlela. Noma kunjalo, sizobe sisebenzisa izinkomba zobuchwepheshe ezingasebenza njengamathuluzi okusisiza sihlonze ukusekela okubalulekile kanye namazinga okumelana, kanye namasiginali wokungena ahlobene nokuhlehla kulawa mazinga.
I-Swing Highs kanye ne-Swing Lows njengokwesekwa nokumelana
1 I-Swing Highs kanye ne-Swing Lows njengokwesekwa nokumelana
2 I-Zigzag Color Inkomba
5 Ukuhweba Strategy Concept
5.1 Thenga ukusethwa kwezohwebo
5.2 Thengisa ukusethwa kwezohwebo
6.2 Kunconywe i-Forex Metatrader 5 Ipulatifomu Yokuhweba
6.3 Ungayifaka kanjani i-Zigzag Support kanye ne-Resistance Pin Bar Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5?
I-Swing Highs kanye ne-Swing Lows amazinga abalulekile lapho imakethe ibe nokuhlehliswa kwentengo okunamandla. Kukula maphuzu lapho imakethe izobona khona izinga lentengo njengephezulu kakhulu noma ephansi kakhulu, okuvame ukuholela ekuthengisweni noma ekuthengeni. Lokhu bese kubangela ukuthi isenzo senani sibuyele emuva siye kolunye uhlangothi ngaleyo ndlela kwakheka ama-swing highs noma ama-swing lows.
Njengoba ukuphakama kwama-swing kungamazinga entengo imakethe ewabone njengaphezulu kakhulu, maningi amathuba okuthi imakethe isazoyibheka njengephezulu kakhulu njengoba intengo iphindela kulawa mazinga. Ngenxa yalesi sizathu singase futhi sicabange ukuthi ukuphakama kwama-swing kungamazinga okumelana avundlile lapho intengo ingase yehle ihlehle isuka..
Ngokwesinye isandla, ama-swing lows amazinga entengo abebhekwa njengaphansi kakhulu. Ngesizathu esifanayo intengo ihlehlisiwe ekuphakameni kokuswayipha, intengo ingase ibuye ibuye phezulu ekujikeni okuphansi. Ngakho-ke, singase futhi sicabange ukwehla okuzungezayo njengamazinga osekelo avundlile angakhona.
I-Zigzag Color Inkomba
Le nguqulo yesikhombi seZigzag nayo ihlela imigqa yayo ngemibala emibili. Imigqa exhuma ujingi oluphansi ukuya phezulu inombala oluhlaza okolwandle omaphakathi, kuyilapho imigqa exhuma ama-swing highs kuya kuma-swing lows inombala ophakathi nendawo obomvana obomvana.
Amaphethini we-Pin Bar maningi amathuba wokuguqula amaphethini wezibani. Isenzo senani sivama ukuhlehla noma nini lapho ifomu lephethini yebha yephinikhodi.
Inkomba Ye-Pin Bar Detector inkomba yobuchwepheshe yangokwezifiso ekhomba ngokuzenzakalelayo amaphethini ebha yephini. Ihlela ukumamatheka kwe-lime ngaphansi kwekhandlela noma nini lapho ikhomba iphethini yephinikhodi ye-bullish, kanye nokumamatheka okubomvu ngenhla kwekhandlela noma nini lapho ithola iphethini yebha yephinikhodi ye-bearish. Noma kunjalo, silungise le nkomba ukuze ihlele ukumamatheka okuluhlaza okwesibhakabhaka noma nini lapho ithola iphethini yebha yephinikhodi ye-bullish ukuze ikhonjwe kalula kungemuva elimhlophe..
Lelisu lokuhweba liyisu elilula lokuhweba elihlehlisayo elihweba amasiginali okubuyisela emuva athuthuka ngokweseka okuvundlile noma izinga lokumelana elisuselwa ekujikeni kwephuzu lentengo eliphansi.
Ama-swing highs kanye nama-swing low akhonjwa ngokufanelekile ngokusekelwe Kunkomba Yombala We-Zigzag. Lawa ma-swing highs kanye nama-swing lows abese esetshenziswa njengesisekelo sokukhomba ukwesekwa okuvundlile kanye namazinga okumelana lapho sizobe silindele izimpawu zokuhlehla ezingaba khona..
I-Pin Bar Detector Indicator ibe isisetshenziswa ukuze kuqinisekiswe isignali yokuhlehla ethuthukayo kusekelo oluvundlile noma ileveli yokumelana..
Vula i-oda lokuthenga ngokushesha nje lapho iphethini yebha yephinikhodi ye-bullish isiqinisekisiwe.
Vula i-oda lokuthengisa ngokushesha nje lapho iphethini ye-bearish pin bar isiqinisekisiwe.
I-Pin Bar Patterns inamathuba aphezulu wokuguqula amaphethini wezibani. Noma kunjalo, akufanele kuthengiswe ngokungafanele kunoma iyiphi indawo eshadini lentengo. Lapho la maphethini akha kubalulekile. Amaphethini webha yephini akha ngamazinga wokusekelwa noma wokumelana nawo asebenza kangcono kunamaphethini akha okungenalutho eshadini. Lokhu kungenxa yokuthi kunezinga lokusekela noma lokumelana elicindezela ngalo.
I-Zigzag Support kanye ne-Resistance Pin Bar Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5 iyinhlanganisela ye-Metatrader 5 (MT5) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
I-Zigzag Support and Resistance Pin Bar Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5 inikeza ithuba lokuhlonza izici ezihlukahlukene namaphethini kumandla wentengo angabonakali ngeso lenyama..
Ungayifaka kanjani i-Zigzag Support kanye ne-Resistance Pin Bar Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5?
Landa i-Zigzag Support kanye ne-Resistance Pin Bar Bounce Forex Trading Isu le-MT5.zip
Hamba kwesokudla ukuze ukhethe Ukusekela kwe-Zigzag kanye ne-Resistance Pin Bar Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5
Uzobona Ukusekela Kwe-Zigzag kanye Ne-Resistance Pin Bar Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5 iyatholakala eshadini lakho.
Isiqephu esedluleAmandla Yangaphakathi MT5 Inkomba
Isihloko esilandelayoHeiken Ashi Zone Trade MT5 Inkomba